ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မသိစိတ်ထဲက အကြောက်လွန်ရောဂါ (Phobias) In:Kawi Inspires, Others
ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာ အရမ်းကြောက်တတ်တဲ့အရာ တစ်ခု၊ နှစ်ခုကတော့ အမြဲတမ်းရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအရာတွေကိုတော့ Phobia လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကြောက်လွန်ရောဂါ (Phobia) ဆိုတာက စိုးရိမ်စိတ်လွန်ကဲတဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းလိုလိုမှာရှိနေတတ်တာဖြစ်တဲ့အပြင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Phobia ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်း မတူညီပါဘူး။ အဲဒါအပြင် Phobia ကို Specific Phobia၊ Social Phobia နဲ့ Agoraphobia ဆိုပြီး (၃) မျိုးထပ်ပြီးခွဲခြားထားပါတယ်။ Specific Phobia ကိုတော့ Simple Phobia လို့ခေါ်တတ်ကြပြီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကောင်ကို ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ကြောက်ရွံ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – အမှောင်ကြောက်တတ်တာမျိုး၊ ခွေးကြောက်တတ်တာမျိုးကို Specific Phobia (Simple Phobia) လို့ခြုံပြီးခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ Social Phobia ကတော့ လူအများနဲ့ဆက်ဆံပြောဆိုရမှာတွေ၊ လူအစုအဝေးရှိတဲ့နေရာသွားရမှာတွေ ကြောက်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Social Phobia ကတော့ ကိုယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ အပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်တတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး Agoraphobia ကတော့ ဓာတ်လှေကားလိုမျိုး အလုံပိတ်အခန်းတွေ၊ လူထူထပ်တဲ့ ကျဉ်းကြပ်တဲ့နေရာတွေကို ကြောက်တတ်ကြတာဖြစ်ပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်နဲ့ အလန့်တကြားဖြစ်စေတဲ့အချိန်တွေမှာ ဒီ Agoraphobia ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ Phobia ဖြစ်တဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ နှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ အသက်ရှုနှုန်းမြန်လာတာတွေ၊ ချွေးစေးတွေပြန်လာတာမျိုးနဲ့ ခြေဖျားလက်ဖျားအေးတာတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ခံစားချက်အပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ်တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားတာကနေ အလန့်တကြားဖြစ်စဉ်တွေအထိပါ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ကို်ယ်ကြောက်တတ်တဲ့အရာနဲ့ ဘယ်လောက်နီးကပ်သလဲဆိုတာအပေါ် မူတည်ပြီးတော့လည်း ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ Phobia တွေက လူတိုင်းလိုလိုမှာပုံမှန်အနေနဲ့ ရှိနေတတ်ကြတာဖြစ်ပြီး သာမန်အားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာ အနှောင့်အယှက်ပေးခဲလှပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ သင့်မှာ မြွေကြောက်တတ်တဲ့ Phobia ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် မြွေတွေမရှိတတ်တဲ့ မြို့ကြီးပြကြီးမှာ နေထိုင်နေတာဟာ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အခက်အခဲမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝမှာ သက်ရောက်မှုမရှိတဲ့ Phobia တွေရှိနေခဲ့ရင်တော့ သာမန်အားဖြင့် သိပ်ပြီးဂရုစိုက်စရာမလိုလောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လူထူထပ်တဲ့နေရာကိုကြောက်တတ်တာတွေ၊ အလုံပိတ်အခန်း၊ ဓာတ်လှေကားကြောက်တတ်တဲ့ Phobia ရှိပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း အမြဲ အဲဒီအရာတွေ၊ အခြေအနေတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှောင်ရှားတာတွေ၊ အကူအညီတောင်းတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီ Phobia ကိုမကြောက်တော့အောင် ကုသတာတွေပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Phobia တော်တော်များများက ကုသမယ်ဆိုရင်လည်း လွယ်ကူပြီးပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပြီး အရမ်းဆိုးဆိုးရွားရွားမဖြစ်ရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ထိ်န်းချုပ်ကုသနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကုသတဲ့နည်းလမ်းတွေက သိပ်မခက်ခဲတဲ့အတွက် စမ်းသပ်ကြည့်ရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စိတ်ထိန်းတတ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တစ်စုံတစ်ခုကို ကြောက်တဲ့အခါ၊ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါတွေမှာ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်တာတွေ၊ အသက်ရှုမြန်လာတာတွေ စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီလက္ခဏာတွေက ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ Phobia အပေါ်ကြောက်ရွံ့တာကို ပိုပြီးလှှုံ့ဆော်ပေးပြီး ပိုပြီးစိတ်ပင်ပန်းစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကြောက်စိတ်တွေ၊ စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ အထိတ်တလန့်မဖြစ်အောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်းကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှုသွင်းရှုထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာမျိုး၊ အဲဒီအရာနားကနေ ထွက်သွားတာမျိုး၊ အကြည့်လွှဲတာမျိုး ပြုလုပ်ပြီးစိတ်မလှုပ်ရှားအောင် စမ်းသပ်ပြီးထိန်းချုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့ Phobia တွေကို တစ်ဆင့်ချင်း နဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ ရင်ဆိုင်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်များများက ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့ အရာတွေ၊ အခြေအနေတွေကနေ ထွက်ပြေးချင်တတ်ကြပေမယ့် Phobia တွေအတွက်ကတော့ ကိုယ့်အကြောက်တရားကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြည့်တာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှောင်လွှဲလိုက်တာက အချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အနည်းငယ် သက်သာရာရစေနိုင်ပေမယ့် သင်ကြောက်တတ်တဲ့ Phobia က ဒီလောက် ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုတော့ သင်သိလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေကနေ အမြဲရှောင်ပုန်းမနေဘဲ အဆင့်တွေခွဲပြီး တစ်ဆင့်ချင်းစီ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ Phobia အပေါ်မှာထားတဲ့ မကောင်းတဲ့အမြင်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ဖျောက်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့အရာတွေကို စိတ်ထဲမှာပုံမှန်ထက်ပိုပုံကြီးချဲ့ပြီး မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေ တွေးမြင်တတ်တာကြောင့် ကြောက်တဲ့စိတ်တွေက တဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာပြီး အထိတ်တလန့်ဖြစ်စေတာတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားကြောက်ရွံ့တာတွေ ဖြစ်လာစေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ကြောက်တတ်တဲ့ Phobia အပေါ် မကောင်းမြင်တတ်တဲ့ဘက်ကို လျှော့ချပြီး ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ အမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မှတ်နေတာတွေကို ဖျောက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ Phobia အပေါ်မြင်တဲ့စိတ်တွေက တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပြီး အရင်လောက်ကြောက်စရာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးမှာ ကိုယ်မွေးလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတွေအပြင် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကြောင့်ပါ ကြောက်တတ်ကြတဲ့ Phobia တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီ Phobia တွေကနေ အမြဲပုန်းရှောင်ပြီးပဲ နေတော့မှာလား? ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်ပြီး တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် လက်ခံလာနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ကြမှာလား? ...
ပိတောက်ရဲ့ သင်္ကေတ In:Kawi Inspires, Others
မြန်မာတို့ရဲ့ နှစ်သစ်အခါသမယဖြစ်တဲ့ တန်ခူးလလေးကိုတော့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ တန်ခူးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာတို့ရဲ့ရင်ထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနေရာမှာ ဖြစ်တည်နေတဲ့အရာ နှစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သင်္ကြန်နဲ့ ပိတောက်ပန်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပိတောက်ဟာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း သာမန် ပန်းတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ပန်းတွေထဲက တစ်မျိုးဖြစ်သလို၊ မြန်မာတိုင်း တန်ဖိုးထားရတဲ့ ပန်းတစ်မျိုးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး ပိတောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်္ကေတတွေလည်းအများကြီး ရှိပါသေးတယ်။ တချို့ ပိတောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေက ဒေသအလိုက်ကွာခြားကြသလို မတူညီတဲ့ အယူအဆတွေလည်းရှိပါတယ်။ ပိတောက်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်္ကေတလေးတွေကတော့… ၁။ သစ္စာရှိခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ ပိတောက်ဟာ ပွင့်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ပွင့်လေ့ရှိတဲ့ပန်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးလူတွေက ပိတောက်ကို တင်စားပြီး “တစ်နှစ်မှာ တစ်လ၊ တစ်လမှာ တစ်ကြိမ်” ပဲပွင့်တဲ့ပန်းလို့တောင် ဆိုကြပါတယ်။ ကျန်တဲ့ရက်တွေမှာ လုံးဝမပွင့်ဘဲ ဧပြီလရဲ့ ရက်တစ်ရက်တည်းမှာပဲ ပွင့်လေ့ရှိတာကြောင့် သစ္စာရှိတယ်လို့ ပြောကြတာပါ။ “တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက် ပိတောက်ဆိုပိတောက်” လို့ ကောင်လေးတွေကတော့ ကောင်မလေးတွေကိုပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၂။ တန်ဖိုးထားခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ ပိတောက်ဟာ အစဉ်အလာနဲ့နေတဲ့ ပန်းတစ်မျိုးပါ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို တစ်နှစ်မှာမှ တစ်ခါပဲပွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပိတောက်ပန်းကို ပန်ဖို့ဆိုရင် တစ်နှစ်စောင့်ရပါလိမ့်မယ်။ ပန်းတစ်မျိုးကိုပန်ဖို့ တစ်နှစ်တောင်စောင့်ရမယ်ဆိုတာ တော်တော်ကြာတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကတန်ဖိုးထားကြတာပါ။ ဒီကနေပြီးတော့ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေဆိုရင် ပိတောက်ပန်းခူးပြီး ပေးလေ့ရှိကြတဲ့ ဓလေ့လေးဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၃။ သန့်စင်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတ ပိတောက်က သင်္ကြန်မိုးရွာပြီးတဲ့နောက်မှာ ပွင့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သင်္ကြန်မိုးကို မြန်မာတွေက နှစ်သစ်ကိုကူးဖို့အတွက် နှစ်ဟောင်းရဲ့ အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောပေးတဲ့ မိုးလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီမိုးရွာပြီးမှ ပွင့်လာတဲ့ပိတောက်ကိုလည်း သန့်စင်ခြင်းရဲ့ သင်္ကေတအဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ …………………………………………………………………………………………………. ၄။ သင်္ကြန်ရဲ့ သင်္ကေတ ပိတောက်နဲ့ သင်္ကြန်၊ သင်္ကြန်နဲ့ ပိတောက်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှခွဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ပိတောက်မရှိတဲ့ သင်္ကြန်ဟာပြည့်စုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ရှိလည်းမရှိနိုင်ပါဘူး။ သင်္ကြန်ဆိုတာနဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ရွှေဝါရောင် ပိတောက်တို့ကို စိတ်ချမ်းမြေ့ ဖွယ်တွေ့ရှိရမှာပါ။ ဘုရားစင်ပေါ်မှာ၊ မိန်းမပျိုတွေရဲ့ ခေါင်းပေါ်မှာ၊ စားပွဲတင်ပန်းအိုးတွေထဲမှာ၊ အလှဆင်တဲ့နေရာတွေမှာ၊ မဏ္ဍပ်ပေါ်က ယိမ်းကနေတဲ့ ယိမ်းသမလေးတွေရဲ့ လည်ပင်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဝါထိန်နေအောင် တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ပိတောက်ကိုယ်စားပြုတဲ့ သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသအလိုက် ကွာခြားနိုင်သလို၊ အယူအဆမတူတာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ပိတောက်ဟာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ အားလုံးတန်ဖိုးထားကြတဲ့ ပန်းအမြဲတမ်းဖြစ်နေမှာပါ။ ...
ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေကို April Fool လုပ်ပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်မယ့်နည်းများ In:Kawi Inspires, Others
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မစ၊ မနောက်ဘဲနေတဲ့လူတွေဟာ တကယ်မခင်လို့ပါတဲ့။ ဒါကြောင့် April Fool နေ့လေးမှာ ကိုယ်ချစ်ရ၊ ခင်ရသူတွေကို စလို့ကောင်းမယ့်နည်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Poop Prank ဒါကတော့ အသန့်ကြိုက်တဲ့လူတွေကိုစဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းပါ။ အီး အတုလေးဝယ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်သာဘေးဘောင်ပေါ်လေးမှာ တင်ထားလိုက်ပါ။ သူတို့ အိမ်သာထဲဝင်တာနဲ့ ထအော်ပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………….. ၂။ Message Prank ဖုန်းကဒ်တွေပေါတဲ့ခေတ်မှာ ဖုန်းကဒ်အသစ်လေးတစ်ခုဝယ်ပြီး အကြိုက်လိုက်စလို့ရပါတယ်နော်။ ကပ်စီးနည်းတဲ့ သူငယ်ချင်းကို online shopping ကပါ၊ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျပါတယ်ဆိုပြီး message ပို့လိုက်ရင် “အောင်မလေး” ဆိုပြီး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………….. ၃။ Mouse Prank အလုပ်က သူငယ်ချင်း၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုစဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလေးပါ။ သူတို့ ကွန်ပျူတာ mouse လေးရဲ့အောက်မှာ ပုံထဲကလိုစာရွက်လေးသွားကပ်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆို mouse ကအလုပ်လုပ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ …………………………………………………………………………………………………….. ၄။ Mouse Setting Prank Mouse နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်စလို့ရတဲ့ နည်းလေးတစ်နည်းပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ mouse setting ထဲက general ထဲမှာ right handed နဲ့ left handed ကို ပြောင်းထားလိုက်ပါ။ အဲဒါဆို left click နဲ့ right click ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………….. ၅။ Nail-polish Soap Prank အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးမှာဖြစ်ဖြစ် စလို့ရတဲ့ ပျော်စရာ prank လေးပါ။ ဆပ်ပြာကို အကြည်ရောင်လက်သည်းနီဆိုးဆေးလေး ဆိုးထားလိုက်ရင် ဆပ်ပြာက အမြုပ်မထွက်တော့ပါဘူး။ အမြုပ်မထွက်တဲ့ ဆပ်ပြာကြီးကို သူတို့ထပ်ခါထပ်ခါ ပွတ်နေပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………….. ၆။ Send Message Prank အွန်လိုင်းကနေ အကောင်းဆုံးစလို့ရမယ့် နည်းလေးပါ။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ message ပို့တဲ့အခါ typing ဖြစ်နေတဲ့ပုံ GIF လေးတွေရှိပါတယ်။ အဲဒါလေးကို download ဆွဲပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို Messenger ကနေပို့လိုက်ရင် သူတို့က သင် typing လုပ်နေတယ်လို့ ထင်သွားပါလိမ့်မယ်။ …………………………………………………………………………………………………….. ၇။ Wallpaper Prank ကွန်ပျူတာမှာ အကောင်းဆုံးဆေးထိုးလို့ရမယ့် နောက်ထပ်နည်းလေးပါ။ သူတို့ကွန်ပျူတာ မှာ file ဖွင့်ထားတဲ့ပုံကို screenshot ရိုက်ထားပြီး wallpaper ပြန်လုပ်ထားတာပါ။ ဒါဆိုသူတို့က file ကြီးပွင့်နေတယ်ဆိုပြီး ပိတ်နေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်က wallpaper ကြီးပါ။ …………………………………………………………………………………………………….. ၈။ Car Prank ကားရှိတဲ့လူတွေကို ချက်ချင်းမျက်လုံးပြူးသွားစေမယ့် အကွက်လေးပါ။ သူတို့ကားမှန်ပေါ်မှာ “ကျွန်တော် ဒီကားကိုတိုက်မိသွားပါတယ်။ အလျော်လိုချင်ရင် ဖုန်းဆက်ပါ” ဆိုပြီး စာရွက်လေးညှပ်ထားခဲ့လိုက်ပါ။ သူတို့တစ်ခါတည်း လန့်သွားပါလိမ့်မယ်။ ...